Ogaden News Agency (ONA) – Banaanbaxyada ka Socda Meela ka Mida Itobiya iyo Masaajidadii Jigjiga oo Lagu Wareejiyay Axbaash – Noora Afgaab
Banaanbaxyada ka Socda Meela ka Mida Itobiya iyo Masaajidadii Jigjiga oo Lagu Wareejiyay Axbaash – Noora Afgaab
Magaalada Bahir Dar oo ah magaala madadaxda qawmiyadda Amxaarada ayaa waxaa ka socday labadii maalmood ee lasoo dhaafay banaanbax ay dadweynaha kaga soo horjeedsadeen markay damceen kooxda TPLF oo magaaladaa xoog ku jooga inay dhul ay leedahay Kaniisad awood ku qaataan. Dadweynaha magaalada ayaa arintaa aad uga gadooday, banaanbaxna ka sameeyay (Riix Halkan), taasoo ay kaga jawaabeen ciidankii TPLF inay rasaaseeyaan dadweynihii banaanbaxayay.
Arintaa ayaa khalkhal horleh ku abuuray nidaamka Itobiya oo aan dulqaad u lahayn gadoodka dadweynaha nooc kasta ha ahaadee, sababtoo ah xukunka ku dhisan cabsida iyo cabudhinta dadweynaha ayaa wuxuu aaminsan yahay in dadweynaha hadday is-fahmaan oo cagta isla helaan ay ogaanayaan awoodooda iyo inay iyagu yihiin asaaska xukunka iyo dawladnimada. Waana sababta ay xukuumadaha ku dhisan sharcidarada isla mar ahaantaana sheegta dimoqraadiyad iyo doorashooyin oo isla markaana ku guulaysta doorashada 99.6% aanay marnaba ugu dulqaadanin xataa cabashada ardayda dugsiyada hoose.
Meela kala duwan oo ka mid ah dalka Itobiya ayaa waxaa ka bilowday banaabxyo lagag soo horjeedo kooxda TPLF ee xukunka ee dalka Itobiya sharcidarada ku haysta. Waxaa sidoo kale maalintii Jimcaha ahayd magaalada Adis Ababa sidii hore ugu soo noqday banaanbaxyadii ay dhigayeen dadka Muslimka ah ee dagan magaalada oo ka cabanaya cadaadiska lagu hayo iyo faragalinta ay dawladda ku hayso diintooda.
Waxyaabaha sida aadka uga xanaajiyay muslimiinta gabi ahaatooda oo midkaad la sheekaysataba uu kuu sheegayo waa heshiiska dhex maray dawladda Itobiya iyo kooxda Shiicada ah ee loo yaqaano Axbaashta oo doonaya inay ku faafiyaan Itobiya caqiidadooda faasidka ah.
Magaalda Jigjiga ayaa gabi ahaan duruustii ka socotay masaajidadii magaalada gacanta loo galiyay Axbaashta iyadoo gabi ahaanba la joojiyay dhamaan duruustii kale ee ka socotay masaajidada, inkastoo fooda loo saaray kooxdii Ajo-Gudhay oo Itobiya ay go’aansatay in laga sifeeyo Ogadenya ka dib markii ujeedadii laga lahaa ay soo afjaranatay. dadka aan xog ogaalka u ahayn nidaamka ay ku shaqeeyaan kooxda TPLF ayaa u haysta in go’aanka Itixaadka looga saarayo Ogadenya ay ka dambaysay markii madaxda Ajo-gudhay kala safteen Cabdi Iley kooxdii kasoo horjeeday. waxaanay ogayn dadka sidaa aaminsan inuusan cabdi iley qaadan karin go’aan noocaa oo kale ah iyadoo sirdoonka Itobiya iyo jenenka fadhiya Harar aanu amarkaa bixinin. Arintaa iyo habka ay Sirdoonka ugu shaqystaan Cabdi iley ayaan baadhitaan kasoo diyaarin doonaa.